✅DOWNLOAD Fokker 27 Family FSX & P3D - Rikoooo
downloads 8 793
Nke a bụ Fokker 27 Family with Fokker F-27 Mk200 / 500, Fairchild F-27A na Fairchild-Hiller FH-227 ụdị. Ejikọtara ya na ọkpọkọ kobere ọkụ nke 3D (enweghị ogwe 2D), ụda omenala na ebe obibi isii.
Ihe ngwugwu a nwere ntụgharị ala maka FSX (Prepar3D v4.5 dakọtara) nke Fokker 27 ezinụlọ ụdị atụgharị sitere na FS9 site na faịlụ mbụ nke Mike Stone site na Björn Kesten.
Fokker F27 bụ ọdụ ụgbọ elu 44-oche turboprop ọdụ ụgbọ elu nke onye ọrụ Dutch Fokker wuru ma wuo ya, nke ezubere iji nwee ihe ịga nke ọma na DC-3. Flightgbọ elu mbụ weere ọnọdụ na November 24, 1955, ma nyefee Aer Lingus nke mbụ na November 1958.
Onye edemede: Ihe osise site n’aka Mike Stone. Tom Gibson na Bernward Bockheim gbanwetụrụ. Gharịrị na FSX usoro nke asụsụ site na Björn Kesten